Choputa ịma mma nke Mekong Delta | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Vietnam
El Mekong Ọ bụ nnukwu osimiri dị ezigbo mkpa na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na otu n'ime ogologo oge na kọntinent a. Ọ gafere ọtụtụ mba mana Delta ihe dị Vietnam, isi nke ọ malitere ịtọba n'oké osimiri, bụ nke mara mma.
Maka ndị hụrụ okike na ihe ịtụnanya ya n'anya, mpaghara a dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ ebe obibi ruru otu puku ụdị anụmanụ, osisi na azụ. Di iche iche di iche iche di egwu ma oburu na etinyere ya na o gafere ala ndi mmadu biri otutu puku afo gaa na ihe okike di nkpa. Ka anyị chọpụta ma.
1 Osimiri Mekong
2 Mekong delta dị ebube
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ọtụtụ na Asia na nwere ezigbo ihe ogologo 4.350 kilomita kemgbe amụrụ ya na mbara ala Tibet. N’oge njem gị niile gafere China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia ma mesịa rute Vietnam onye oke osimiri ya si na ya sọpuo n'oké osimiri. Osimiri ahụ na ndụ ya wee bụrụ ihe jikọrọ aka.
E kewara ọdọ mmiri ahụ na bezin ahụ dị n’elu, nke dị na Tibet China, na obere bezin ahụ, nke dị n’ógbè Yunnan. Ọ bụ mgbe ogologo ụzọ gasịrị ka ọ na-asọba na South China Oké Osimiri a dị mgbagwoju anya na ọmarịcha Delta nke dị na Vietnamese. Ọ bụ osimiri na ọtụtụ anụ oriri, ụfọdụ ka na-ewu. Ọtụtụ, n'ezie, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ unu niile na-arụtụ aka n'ọgbọ nke ike eletrik.
Na usoro nke ndu ndu ọ bụ naanị Amazon karịrị ya. A na-eme atụmatụ na ọ bụ ebe obibi maka ụdị ahịhịa 20 puku, ihe karịrị otu puku ụdị nnụnụ, ụdị anụ ọhịa 800, anụmanụ pụrụ iche 430 na ọtụtụ amphibians na mgbakwunye na ụdị 850 nke azụ azụ. Ọ bụ ibu biodiverse. Ma gịnị banyere ịgagharị Mekong?
Ọ bụ osimiri a na-agagharị agagharị Ruo ọtụtụ narị afọ na n’akụkụ osimiri ya, a na-ewu obodo, obodo nta na obodo nta. Ọbụna taa ọ ga-ekwe omume ịchọta obodo ndị na-akụ azụ na-aga n'ihu na-eji ụzọ azụmahịa jikọtara akụkụ a nke Eshia.
Mekong delta dị ebube
Dị ọdịda anyanwụ nke Ho Chi Minh obodo, Saigon oge ochie. Akụkụ Vietnamese nke delta nwere ọtụtụ ọdịdị ala mana n'ozuzu akwụkwọ ozi kacha ochie bụ ala mmiri jupụtara na ndịda na ụfọdụ ugwu dị nro ọdịda anyanwụ na ugwu, ngwaahịa tectonic mgbe efere Eurasia na India jikọtara, 50 nde afọ gara aga n'azụ.
Osimiri ahụ na-asọpụta site n'okporo ụzọ abụọ dị mkpa, ha abụọ na-asọba n'oké Osimiri East. Ọ bụkwa ya bụ obere mpaghara oke ọhịa dị na mba ahụ, Puku hekta 300 na ihe a niile na-emetụta ihu igwe na emetụta ya n'otu oge ahụ. Na Delta bụ mpaghara nke obere elu ya mere ọ dị oke enwe ike ide mmiri oke osimiri agaghi-arili. Nke a, n’aka nke ya, na - amịpụta nnu nnu karịa na ala ndị dị n’akụkụ mmiri na o doro anya, nchegbu maka usoro gọọmentị na - ebuso nsonaazụ ọjọọ nke ọnọdụ ahụ.
Eziokwu bụ na ọtụtụ ndị njem nleta nwere mmasị na mbara ala ndị a. Na mgbakwunye na ịtụ Hanoi, Hoi An na Sapa na-elekwasị anya na Mekong Delta na ndepụta… Ọ bara uru? Ọtụtụ foto ahịa ndị ahụ na-ese n'elu mmiri hà na eziokwu? Ọbụghị ncha ncha. Delta na-adịkarị ka ndị nke Vietnam ndị ọzọ, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla dị iche ma ọ bụ ihe ọ bụla na-enwu gbaa. Ihe bụ ihe ọzọ, enweghị ike itinye uche n'otu ebe ma ọ bụ abụọ naanị n'ihi na Delta na-ebi n'akụkụ mpaghara ọdịda anyanwụ nke mba ahụ n'ezie.
Echere m o buru ibu. Ejikọtara ihe ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem nleta ọnụ njem njem iji nweta dollar na euro nke njem. Ego nke onye obula choro inwe. Ma ebe obula ị họọrọ, ị ga - emerịrị ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu ụzọ ahụ: njem ụgbọ mmiri, ịga ụlọ nsọ, ahịa dị iche iche. Eziokwu ahụ sara mbara ma dị iche iche: ha bụ obodo na obodo ịkụ azụ ị nwere ike ịhụ site n'osimiri dị n'ụsọ osimiri ma ọ bụ na ị na-atụgharị azụ ụbọchị ọzọ.
Ikwesiri imata na Delta abụghị obere mpaghara ị na-eleta na ụbọchị ole na ole dịka ebe ndị ọzọ na Vietnam. Ọ bụrụ n’ezie ị chọrọ ịmata ya mgbe ahụ chọrọ atụmatụ Ma ọ gaghị ekwe omume ileta ihe niile ma ị ga-ejedebe naanị ịga njem nleta kachasị. Iji hụ ndị ọzọ ma banyekwuo miri were were onye ndu na ọkachamara pụrụ iche. N'ikwu ya, Kedu ihe ị ga-eme na Delta?
Mbụ ị nwere ike ịmalite obi obi Delta bụ Can Tho obodo. Ọ bụ njem, etiti ndọrọ ndọrọ ọchịchị na azụmahịa nke mpaghara ahụ ma nwee mpaghara osimiri mara mma, n'okporo ámá na boulevards iji chọpụta. Ọ bụ ebe kachasị mma ịga ije. Yabụ, ị ga-aga leta ndị Cai Rang sere n'elu Market, Mma agwa phu quoc, ugwu Sam ma obu Ben Tre.
Enwere ọmarịcha nnụnụ nsọ, na Tra Su, enwerekwa nke Xeo Quyt ọhịa na ili nke Ba Chuc. Nke a bụ ihe ncheta nke na-echeta oke egwu nke ọchịchị Khmer: na 1978 gọọmentị a gburu ihe karịrị ndị obodo 75 ma naanị mmadụ abụọ fọrọ ndụ. Ememe ncheta a nwere igbe okike na foto, ọ dịkwa kilomita XNUMX site na Ha Tien ka ị wee hazie a njem site na Chau Doc maka ihe dị ka euro 30.
Osisi Xeo Quyt di kilomita 35 site na Cao Lahn ma gbakwunye na osisi ndi mara mma enwere ogbe ndi Vietnam Cong. Enwere ike iji ụgbọ epeepe lelee ya, n’ime ọhịa, ma ọ bụ ụzọ ụkwụ. Ridegba ụgbọ mmiri bụ nkeji iri abụọ ma ha abụọ ga-eme ka ị hụ ebe nchekwa na tunnels ndị bidoro n’oge Vietnam. Yabụ, dịka ị ga-ahụ, ọ bụ ezie na mpaghara Mekong dị oke ma mara na ọ na-ewe oge na agụụ, ị nwere ike ịga leta ya mgbe niile, na-emegharị maka njem ndị njem ndị njem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Chọpụta ịma mma nke Mekong Delta